Sary avy amin’ny Mokattam Blog Tales · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2018 2:37 GMT
(Marihina fa tamin'ny 19 Janoary 2011 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Amin'ny maha-anisan'ny hetsika ataonay ao amin'ny Rising Voices ao Egypta, izay azo tanterahana tamin'ny famatsiam-bola avy amin'ny Orina Mpanasoa Heinrich Böll – ny Biraom-paritra Afovoany Atsinanana, dia nandefa lahatsary miisa telo izahay izay ahafahana mijery akaiky ny tetikasa tsirairay. Ilay Egyptiana mpanatontosa horonantsary Mahmoud Saber sy ny ekipany no namarana ny lahatsary miisa telo izay havoakanay eto amin'ny tranokalan'ny Rising Voices.
Nampiasa ny sehatra Universal Subtitles ihany koa izahay ho an'ireto lahatsary miisa telo ireto mba hanampiana dikantsoratra amin'ny teny Anglisy. Io sehatra fiaraha-miasa io no ahafahana mampiditra fiteny fanampiny amin'ny fomba mora, ary manasa ny mpamaky izahay noho izany hanampy dikantsoratra amin'ny fiteny hafa.
Ny lahatsary faharoa dia manasongadina ny tetikasa Mokattam Blog Tales tarihan'i Nesma Gewily, izay niara-niasa tamin'ireo tanora avy ao amin'ny faritr'i Mokattam ao Kairo miaraka amin'ny atrikasan'ny fanononana tantara sy ny fakàna sary.
10 ora izayKaraiba